AHOANA NY FAMERENANA AMIN'NY LAONINY NY TANTARAN'NY YANDEX BROWSER - YANDEX - 2019
Avereno ny tantara nofafana ao amin'ny Yandex Browser
Ny bokikely voalohany dia mety ho dokambarotra tena tsara na karazana karatra fandraharahana ho an'ny orinasa rehetra. Tsy voatery hanazava ny zavatra ataon'ny orinasa na ny vondrom-piarahamonina ianao - omeo bokikely fotsiny ilay olona. Mba hamoronana bokikely ankehitriny dia ampiasao fandaharana mba hiasa amin'ny fitaovana vita printy. Asehoy anay ny fandaharam-pampianarana 3 tsara indrindra amin'ny famoronana bokikely amin'ny ordinateranao.
Amin'ny ankapobeny, ny programa famoronana bokikely dia mitovy. Mamela anao izy ireo hizara ny tsanganana ho tsanganana 2 na 3. Rehefa avy mameno ireo tsanganana miaraka amin'ny fitaovana ianao ary manonta ilay rakitra, dia hahazo tapa-taratasy izay azo alaina ianao, ka mamadika azy ho bokikely mahafinaritra.
Scribus dia programa maimaim-poana fanontam-pirinty taratasy. Manampy anao hanonta bokikely iray manontolo ny famoahana azy. Ao amin'ny fampiharana dia misy fotoana hisafidianana ny famolavolàna ny bokikely (maromaro).
Scribus dia ahafahanao manamboatra bokikely, ary asio sary. Ny fananana milina iray dia manampy amin'ny fanamorana ny singa rehetra ao amin'ilay bokikely. Ankoatra izay, ny fandaharana dia adika amin'ny teny Rosiana.
Download ny rindrambaiko Scribus
Ny Fine Print dia tsy fandaharanasam-pifanarahana tanteraka, fa ho fanampiana ho an'ny programa hafa hiasa miaraka amin'ny antontan-taratasy. Ny varavarankely FinePrint dia azo jerena amin'ny alàlan'ny fanontam-pirinty - ny mpamorona dia virtoaly virtualista amin'ny pirinty.
Fine Print manampy karazana endri-javatra ho an'ny programa printy. Anisan'ireny endri-javatra ireny dia misy asa iray hamoronana bokikely iray. izany hoe Na dia tsy manohana ny fampisehoana an-tsokosoko aza ny fandaharam-potoana, dia hampiditra io endri-javatra io amin'ny FinePrint ny FinePrint.
Ankoatra izany, ny fampiharana dia afaka manampy marika maromaro ao amin'ny pejy rehefa manonta (daty, nomeraon-pejy, sns.), Ary manatsara ny fampiasana ny loko fanontana.
Mpandrindra dia programa hiasa amin'ny dokam-barotra printy avy amin'ny orinasa malaza Microsoft. Ny fampiharana dia manohana ireo fenitra avo lenta toy ny Word sy Excel.
Ao amin'ny Mpanjifa, afaka mamorona taratasy an-tsoratra, bokikely, bokikely, stickers ary fitaovana hafa vita printy ianao. Ny interface dia mitovy amin'ny Word, maro no hahatsapa ao an-trano rehefa miasa ao amin'ny Microsoft Office Publisher.
Ny hany tokana - ny fampiharana dia aloa. Ny vanim-potoana fanombanana dia 1 volana.
Lesona: Mamorona bokikely iray ao amin'ny Mpanjifa
Ankehitriny fantatrao izay programa ampiasaina hamoronana bokikely iray. Mizara ity fahalalana ity miaraka amin'ireo namanao sy olom-pantatrao!
Jereo koa: Ahoana ny famoronana bokikely iray amin'ny Microsoft Word
https://termotools.com mg.termotools.com © Yandex 2019